Harkisanii kaa'uudhaan saxaatoo galmee tokko irraa gara birootti garagalchuu ni dandeessa. Yoo galmeeke maxxansiisuuf karoorfatteetta tahe, seerota mirga maxxansaa akeekadhuutii eeyyama barreessitootaa argadhu.
Galmee kan keessatti wanta saxaatoo saaguu barbaaddu bani.
Galmee kan irraa saxatoo garagalchuu barbaaddu bani.
Furtuu DirqalaAlt dhiibdee qabuun geessituu inni agarsiisu kamiyyuu osoo hin hojjoomiin isa filachuuf saxaatoo cuqaasi.
Qabduu hantuutee akka dhiibdetti tursiiti yommuu wantichi gara kuufannoo keessaatti garagalfamu yeroo gabaabaaf eegi.
Saxaatoo garakeessa galmee birootti harkiisi.Yoo galmeewwan walcinaatti hin mul'atan tahe, jalqaba qabduu hantuutee dhiibdee turuun akeektuu hantuutee gara qabduu galmee galteetti siiqsi. Achiin booda galmeen gaaffii keessaa yommuu agarsiifamu akeektuu hantuutee garakeessa galmichaatti siiqsuu ni dandeessa.
Qabduu hantuutee yerooma qareen barruu fajajaa qubannoo bakka garagalcha fakkii saaguu barbaaddu agarsiistu gad lakkisi.
Yoo saxaatoon geessituu waliin walitti hidhaman, saxaatoo osoo hin taane geessituun ni saagama.
Title is: Saxaatoo Galmeewwan Gidduu Garagalchuu